Geeridii Marxuum: Ahmed kathrada AUN. – Balcad.com Teyteyleey
Waxaa magaalada Johannesburg ee dalka south Afrika ku geeriyooday 28/3/2017 asaga oo 87 jirah, Mudane Ahmed kathrada AUN oo ka mid ahaa muslimiintii reer South Afrika ee muddada dheer u soo halgamay xuriyadda dalka K/Afrika . wax uu ku dhashay Magaalada Schweizer-Reneke, oo qiyaastii 200Mile u jirta Johannesburg , 21/8/1929.
Mudane Ahmed kathrada waxa saaxiiba ay ahaayeen oo xabsiga ay kuwada jireen Nelson Mandela fiiri sawirka 1aad
Waxa uu bilaabay halgankiisa asaga oo 17 sanno jir ah,noloshiisa inta badan waxa uu ku dhameeystay xabiga, marna kama tanasulin fekerkii gobanima doonka in kasta oo si xun loo ciqaabay,waxa uu xabsiga ku jiray 26 sanno iyo 3 billood,weliba 18 sanno oo ka mid ah mudadii uu xirnaa waxa uu ku jiray xabsiga u ciqaabta xun ee ku yaal jasiiradda Robben Island.fiiri sawirka 2aad.
Jasiiradu waxa ay dhowr mile u jirtaa cirifka ugu koofureeyo qaarada Africa, waa meel ay adagtahay in laga baxsado,bacdamaa badda ku wareegsan ay tahay mid aad u kacsan, inta badan waa dhagxaan, dhir aad u yar ayaana ku taal, ma laha deegaan ay deganyihiin dad shacab ah, waa xabsi oo kaliya,beri waxa ay aheed meel la geeyo dadka qaba cudurka juudaanka. waxa ay maxaabiistu seexan jireen qolal cariiri ah oo kali kali loo seexo oo aan laheeyn firaash dhulka la dhigto,marka laga reebo hal bust, sidda qolkii uu ku xiraa Nelson mandela fiiri sawirka 3aad,inkastoo markii dambe maxaabiis mudnaan gaar ah la siiyay sariira yar yar sawiiro We offer the most advantageous carbozyne prices on the market, and you may buy your carbozyne for only 40.46 instantly! fiiri sawirka 4aad,
Illaa daba yaaqadii qarnigii 17aad waxa ay aheed xabsi lageeyo maxaabiista siyaasadeed ,ugu horeeyna dadkii reer yurub ee Dutch-ahaa ayaa xabsi ahaan u iticmaali jiray.
Waxa kale oo halkaa lagu xiri jiray qaar ka mid ahaa culumadii suufiyada islaamka ee ahaa kuwii ugu horeeyay ee halkaa islaamka geeyay ee uu ka mid ahaa Imaamyadii ugu horeeyay ee Capetown Sayed Abdurahman Moturu,Imaamka oo halkaa xabsi masaafuris loogeeyay 1740kii, kuna geeriyooday halka 1754tii. Jasiirada waxaa ku yaal masjid lagu xasuusto suufigaa, inkastoo aynaba meesha joogin cid ku tukata hadda .fiiri sawirka 5aad.
Waxa ay aheeyd goob aad u kulul waqtiyada qaar oo dhagxaantaa la qodayo oo ah qaar dadku ay ku indha beelayaan,sida uu ii sheegay mid ka mid ahaa maxaabiistii la xirneeyd Nelson mandela ahaana qofkii ugu da’da yaraa xabsiga ku yaal Jasiirada Robben Island ee dalka K/Afrika fiiri sawirka 6, 7,8aad.
Mudane Ahmed Kathrada intii uu xabsigaa ku jiraty waxa uu kasbada 4 shahaado heer jaamacaded oo qaar ay ahaayeey shahaado sharaf ay jaamacado siiyaeen bacdamaa uu lahaa aqoon u dhiganta kuwaa oo kala ahaa.1- BA (in History and Criminology).2- Bibliography (in African Politics and Library Science).3-BA Honours (History).4.BA Honours (African Politics),waxa uuna xabsiga ka soo baxay 15/10/1989.
FG: waxaan mar kale u mahadcelinayaa ardayda ,mujtamaca somalida iyo maamulka jaamacada Stellenbosch University ee magaalada Cape town oo ii suura galiyay in aan soo arko jasiradaa iyo xabsigaa taariikhi ah.
Qore: yahya Yahya Amir